OTU ESI EME KA EGO DI N'IGWE N'IGWE: OTU NYOCHAA N'ELU 20 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Ụmụaka na ndị okenye na-enwe mmasị igwu egwu egwuregwu n'ịntanetị, mana ọ bụghị mmadụ niile maara na ha nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị oge kachasị mma, kamakwa ezigbo ego. Ihe kachasị mkpa bụ ịhọrọ oru ngo nke na-enye gị ohere ịgbanwe ego ị nwetara maka ezigbo ya ma wepụ ya site na usoro ịkwụ ụgwọ ego, mgbe ị gachara, ị ghaghị ịbanye n'ime ụwa a ma nwee obi ụtọ abụọ. Kedu otu esi eme ego na egwuregwu kọmputa, gịnịkwa ka onye na-egwu egwuregwu chọrọ ịma banyere usoro a nke ịmepụta ego?
Ịtụle egwuregwu ịntanetị ị nwere ike imeta
Ụwa nke onye ọrụ ubi
Ubi akwukwo nri nke akwukwo nri
Egwuregwu egwu egwu crypto
Russia nkwụnye ego
Ịgba ọsọ ego
Oge mmechi ahụ
Ị nwere ike nweta ego na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile nke oge a, dịka ọmụmaatụ, na ụwa nke Tanks na World of Warcraft. Ma nsogbu ahụ bụ na ndị na-egwu egwuregwu na-achọ inweta ego ga-enweta ọkwa dị elu. Ọ dị mfe iji nweta ihe nchọgharị ma ọ bụ Flash-egwuregwu - ha nwere egwuregwu dị mfe ma ghara ịchọ nkà pụrụ iche ma ọ bụ ahụmịhe.
Ọrụ ahụ na-eji ihe omume sitere na ụlọ ọrụ Microgaming, Mega Jack, Novomatic, NetEnt, Play'n GO
Afọ ntọhapụ: 2012
Otu n'ime obere casinos nwere ike ime nke ọma ma nwee ezigbo aha. Iji nweta ego, ị ga-emeri na egwuregwu dị iche iche nke ohere, na-amalite site na roulette, na-ejedebe na oghere (ígwè oghere) na iche iche. Enweghi ike inweta Winnings na withdrawals, a pụkwara inweta ego n'ụzọ ọ bụla - usoro nkwụ ụgwọ kọmputa, kaadị akụ, ụgwọ ekwentị.
Ihe ntanetị ịntanetị:
enweghị ihe ọmụma banyere aghụghọ;
Akwa ọtụtụ egwuregwu dị iche iche na-emelite kwa mgbe.
Egwuregwu nke egwuregwu ahụ:
usoro nkwenye akaụntụ ogologo oge;
ogologo na-eche maka igbu nke arịrịọ.
Ihe karịrị nde mmadụ ise edebara aha na egwuregwu ahụ
Oge mmefu: 2014
Ego taxi bụ otu n'ime atụmatụ akụ na ụzụ kachasị ewu ewu na njirimara dị mfe ma dị egwu. Onye ọkpụkpọ ahụ aghaghị ịzụta ụgbọ ala, tinye ya tagzi ma mepụta iwu ọhụụ, yana ka ụgbọ ala ahụ ka mma, ọ ga-abawanye uru. Enwere ike inweta 0.33 ruo 1270 rubles kwa ụbọchị, ndị egwuregwu nwere ahụmahụ na-enweta 250-500 rubles kwa ụbọchị. Enwere ike iwepu ego na e-wallets ma ọ bụ kaadị bank na ọrụ a na-anabata.
Uru nke usoro akụ na ụba:
nnyeòhèrè dị mfe;
nkwado nkà na enyi enyi;
nkwụsị ngwa ngwa;
ohere iji nweta ezi ego;
Ndị na-egwu egwu nwere ike isonye n'ụdị nkwalite niile na ịnweta bonuses.
Ihe oru ngo a:
iji nweta nnukwu ego, ị ga-etinye ego na egwuregwu - na-enweghị nke a, ego ga-adị ntakịrị, ọ ga-ewe oge buru ibu iji kwalite ahịa azụmahịa;
Enwere isi ihe ịkwụ ụgwọ na maka iwepụ ego ị ga-atụ anya na ha nwere ego.
Ọnụ ego a na-ekpebi site na mmepe kwesịrị ekwesị nke ugbo.
Afọ mmepe: 2016
Ngwongwo oru ugbo na usoro onodu aku na uba - onye nwe ugbo gha aghaghi imeputa mmeputa ha site n'inwu uzo di irè. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike kụrụ ọka wit, gwerie ya na ntụ ọka na-akpọọ nkụ, nke a na-ere na nkwupụta nzuzo. A na-ewepụ ego ahụ na sistemụ ntanetị kọmputa (ma e wezụga Webmoney), kaadị akụ na ekwentị mkpanaaka, ụgwọ nkezi bụ 30-150 rubles kwa ụbọchị.
Maka ọganihu dị irè ọ na-atụ aro ka ị mụọ ihe ndị chọrọ ma mee atụmatụ ego, ma zụta ụlọ na osisi ndị dị mkpa.
Uru nke ngwa ngwa ugbo:
enwe ike ime otu ihe ma mee ihe ndị ọzọ;
ọrụ dị mfe;
ikike iji nweta ụgwọ na-egwu na igwu egwu.
Naanị ndị egwuregwu ndị ruru ọkwa 5 nwere ike ịdọrọ ego;
n'ihi na ego a na-enweta na-achọ nkwụnye ego;
ndịna-emeputa oge ochie;
saịtị ahụ na-akụda ụfọdụ mgbe.
Ị nwere ike igwu egwu na ihe nkesa agha ma ọ bụ ọgụ
Oge mmepe: 2010
Atụmatụ akụ na ụba agha na ihe ndị dị n'echiche efu. Ihe kacha mkpa n'ime egwuregwu ahụ bụ nhọta nke pearl pel - nnukwu ihe onwunwe na ihe ndị nwere ike iji ree ezigbo ego. N'akụkụ ahụ, ịkwesịrị ịzụlite ókèala gị na sayensị, chebe onwe gị pụọ n'aka ndị mọnk na ndị agbata obi na-adịghị ahụ n'anya, chọta ndị enyi ma sonyere ezinụlọ. Ihe egwuregwu ndị ọkachamara na-akpata ruo $ 500-800 kwa ọnwa, a na-ewepụ ego site na usoro ịkwụ ụgwọ.
Uru nke usoro:
egwuregwu ahụ adịghị achọ ka ọnụnọ mgbe niile;
ihe mara mma;
ọrụ dịgasị iche iche;
eche echiche maka ọzụzụ maka ndị na-amalite.
nke kacha mkpa maka ego a chọrọ ($ 10-20);
insufficiently ike gameplay;
Ọnụ ọgụgụ ntinye aka kachasị elu bụ 9%
Afọ mmepe: 2018
Atụmatụ akụ na ụba nke ndị na-egwu egwuregwu nwere na-akpọ ego etiti. Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịzụta dragons ma ree nsen ndị ha debere. Enwere ike ịzụta anụ dị iche iche dị ka ịchọrọ, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike "ịpị" ha ka ha wee nwee ike iburu ngwa ngwa. Iwepụ ego nye e-wallets, gụnyere ego a na-akwụ ụgwọ nwere ike wepụ na Bitcoins, ego kachasị - 1.93 rubles kwa ọnwa.
Uru nke egwuregwu ahụ:
egwuregwu dị mfe, nke ọ na-adịghị mkpa iji wuo njikọ akụ na ụba ogologo oge;
ohere maka ego ndị ọzọ (ilele ndị mgbasa ozi saịtị);
nke ọma mepụtara.
Atụmatụ akụ na ụba:
akaụntụ onwe onye mgbagwoju anya;
enweghị ike ịkwụsị ego site na usoro nkwụnye ego a na-ahụkarị (Yandex.Money, Webmoney, PayPal).
Egwuregwu ahụ nwere ebe nrụọrụ weebụ haziri nke ọma.
Afọ mmepe: 2017
Egwuregwu maka ndị fan nke ezigbo "ochie" - ndị na-egwu egwuregwu ga-azụ ụlọ na ịzụlite ha na ọkwa ụfọdụ, na-enweta ego site na ụlọ ọ bụla - karịa, karịa na ọ bụ "mma", ka ị ga-enweta. Ụzọ mgbapụ bụ usoro nkwụ ụgwọ kọmputa na kaadị ego, ego kachasị elu bụ 14 rubles kwa elekere.
Uru nke oru ngo a:
ọ dịghị ego ego kachasị elu;
nnukwu ego na ndebanye aha;
ihe dị mma.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu:
enweta ego na-enweghị ego ọ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume;
Ị nwere ike ịdọrọ nanị pasent 50 nke ego a na-enweta n'ime ụlọ egwuregwu (ihe ọ bụla ọzọ na-eduzi na -eme ka ụlọ).
Mmepe obodo ahụ meghere ụzọ ọhụrụ nke inweta
Egwuregwu ọzọ na-adabere na ụkpụrụ nke otu - nke kachasị mkpa bụ ịzụta ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ, mepee ha n'ogo dị elu ma nweta ego kwesịrị ekwesị. Akwụsị ụgwọ ego a na-akwụ ụgwọ site na enyemaka nke usoro nkwụ ụgwọ, ego kachasị dịka ihe ruru 11 rubles kwa ụbọchị, kachasị, dịka ndị mmepe ahụ, enweghị njedebe.
ihe na-adọrọ mmasị, akụkọ ọhụrụ (usoro ntụrụndụ "Ezigbo ego" na nhọrọ ọhụrụ);
ezigbo nkà na ụzụ.
egwuregwu nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nuances nke ị chọrọ ogologo oge ịghọta;
maka ịhapụ ego, ọ bụ naanị usoro ego ịkwụ ụgwọ na-adịchaghị mma, a na-etinyekwa ngwa ahụ maka otu ụbọchị.
Na mbụ, nnụnụ ahụ akwụghachi, ihe ọ na-efu
Atụmatụ akụ na ụba dị mfe site na ụdị "ugbo nnụnụ", bụ nke a na-enweta ego site na ire ere. Ya mere, ọ dị mkpa ka ịzụta nnụnụ nke ụcha: agba ọcha na-eweta ego ole na ole, uhie bụ ntakịrị ihe, wdg. Ụgwọ akwụ ụgwọ a (site na 1 ruble kwa ụbọchị) nwere ike gbanwee n'ọnọdụ ọnụego ma zigara e-wallets, ma ọ bụ nweta ndị ọhụrụ nnụnụ.
ọchị na mfe gameplay;
atụmatụ dị elu;
ohere ị ga-arụ na saịtị sọọsọ na mgbasa ozi.
nzaghachi banyere egwuregwu ahụ bụ nnukwu arụmụka (ntakịrị ihe ọmụma banyere nsogbu ndị malitere na ịkwụ ụgwọ);
n'ihi na ego a na-enweta na-agụnye ego.
Egwuregwu ahụ dị mfe, ọ bụghị ndị mara mma mara mma.
Mwepụta afọ: 2015
Atụmatụ akụ na ụba dị mfe, dị ka usoro egwuregwu ndị ọzọ "ugbo," nke na-enye ndị na-eme egwuregwu ka ha nwalee onwe ha dị ka onye nwe ụlọ kụrụ. Mbụ ị chọrọ ịzụta bushes, kụọ ha na egwu egwu, wee chịkọta akwụkwọ ma ree ha na nchịkwa ahụ. Ị nwere ike irite site na 1 ruble kwa ụbọchị, ego na-egosipụta na e-wallets, gụnyere WebMoney, Yandex.Money na Bitcoin.
Uru nke egwuregwu kọmputa:
ezigbo bonus mmalite maka ndị mbido;
elementary gameplay (epupụta gbapụtara na-akpaghị aka);
anaghị achọ ịnọ n'ihu na saịtị ahụ;
Achịba dị iche iche dị iche iche maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
enweta ego na-enweghị ego ma na-adọta ndị ntinye aha ga-adị ntakịrị;
E nwere ozi banyere igbochi akaụntụ n'enweghị ihe kpatara ya.
Egwuregwu ahụ na-eji FSR emepụta ego
Oge mmepe: 2011
Otu simulator akụ na ụba nke na-enye ọtụtụ ụzọ isi nweta ego na ikike ịnyefe ego n'ime ego. Onye oru ugbo a kwesiri imeputa ihe ubi ha n'ubi, weputa ha site n'enye aka nke umu ugbo ma obu meputa ulo oru. Ihe ọ bụla a rụpụtara, na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ nke ọrụ ahịa, nwere ike ibufe ya na e-wallets, ụgwọ ego - 10-200 rubles kwa ụbọchị, mana ndị egwuregwu nwere ahụmahụ na-enweta ọtụtụ ihe.
Onu ogugu ego site na oru ngo a bufere ka mmepe nke ahia n'inweta ume di oku site na briquettes na Republic of Moldova.
Uru nke simulator akụ na ụba:
ọrụ dị iche iche;
a pụrụ ịdabere na ya (enweghi nyocha na-ezighi ezi na ozi gbasara enweghị ego);
Egwuregwu egwuregwu ahụ: ị ga-etinye oge dị ukwuu na mmepe ma ọ bụ mee nnukwu ego iji nweta ego nkịtị.
E nweghị ugwo ịkwụ ụgwọ na egwuregwu.
Egwuregwu ahụ, nke kachasị mkpa bụ ịzụlite ugbo gị, na-eto ma na-ere ngwaahịa ugbo. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere akwa dị iche na akwụkwọ nri 9 (beets, melons, garlic, wdg), nke ọ bụla nwere uru nke ya, na-eto ma na-akwụ ụgwọ ọsọ ọsọ. Ị nwere ike irite site na 1-2 rubles kwa ụbọchị ọ bụghị naanị na ugbo, kamakwa na-adọta ndị na-ezo aha, mgbe nke a ị nwere ike ịdọrọ ego na e-wallets ma ọ bụ nọmba ekwentị.
ezigbo nkwado akaebe;
nzaghachi ziri ezi n'aka ndị ọrụ;
bonuses n'elu ndebanye aha.
ị nwere ike ịdọrọ nanị pasent 50 nke ego gị;
maka iwepụ, ịkwesịrị ịmejupụta akaụntụ gị na rubles 10 ma ọ bụ nweta ego site na ebe nrụọrụ weebụ sọọfụ.
Mgbe ndebanye aha, a na-agbakwunye otu nde sapphires.
Ụbọchị ịmepụta: 2018
Ọrụ ahụ, nke na-enye onyinye maka ire ere pollen. Dika akuko si kwuo, onye ozo n'osisi anwansi choro ịzuta ihe ndi ahia ma ree mmanu ohia maka sapphires na rubies. Enwere ike gbanwere ọlaọcha maka ezigbo ego ma wepụ ya site na iji usoro ịkwụ ụgwọ nke ọma, ego kacha nta bụ 3 rubles kwa ụbọchị.
ndị na-adọrọ mmasị na ndị mara mma;
arụ ọrụ na ọrụ dị mfe;
enwere ike inweta ego ndị ọzọ na-aga n'achụgharị akwụkwọ na-adọta ndị ọzọ egwuregwu;
ihe egwuregwu ahụ anaghị achọ ịnọ mgbe niile na saịtị ahụ.
iji wepu ego, odi mkpa ka i mechie akaụntụ gi maka 30 rubles;
Enweghi ego n'inweghi ego.
Na komputa na-adịghị ike iji nweta ntinye ego agaghị arụ ọrụ
Egwuregwu simulation, nke gụnyere nbudata nke Bitcoin cryptocurrency na ọtụtụ ụzọ. Egwuregwu ahụ abụghị ihe na-adọrọ mmasị, ma ihe kachasị mkpa bụ na onye ọrụ ahụ abanye na ikpo okwu nke na-eji ike nke kọmputa ya maka ntinye mkpuchi ego - a na-akwụ ụgwọ ụfọdụ maka akaụntụ ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-enyefe ego ahụ n'aka ezigbo ego. Erite na-adabere na ike nke ngwaọrụ ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, na n 'ọnụ ọgụgụ dịgasị iche site na mkpụrụ ego rubles ruo 50-100 dolla n'ọnwa.
nzaghachi ziri ezi site na egwuregwu;
enwe ike imepụta ntụgharị uche ọ bụghị naanị site na nsị, kamakwa site na ịrụ ọrụ dị iche iche, ebe ndị na-asọ asọ na lotteries.
Ngwakọta ihe omuma nke aku na uba:
iji nweta ego ga-ewe oge na mgbalị;
Ịghọta egwuregwu egwuregwu maka onye mbido bụ ihe siri ike.
Na egwuregwu ị nwere ike irite ihe mmemme mmemme
Otu n'ime ụlọ ọrụ ego a ma ama na Network, nke a na-eme n'ụdị egwuregwu na ihe efu. Ndị na-egwu egwu ga-ewulite ma wuo obodo nke aka ha, inweta ego site na ụlọ dị iche iche - n'oge usoro egwuregwu ha nwere ike 'ịkụgharị', uru na-aba ụba. Ego kacha nta bụ 30 kopecks kwa ụbọchị, kachasị na-akparaghị ókè, a na-ebute ego na kọmputa.
mara mma eserese na imewe;
ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke bonuses na nkwalite maka ndị egwuregwu;
opekempe ịmalite ego.
nyocha dị iche iche na Intanet;
usoro iji meziwanye ụlọ dị nnọọ ngwa ngwa;
Enwere ike ịkwụ ụgwọ ego site na otu usoro ịkwụ ụgwọ.
Ihe dị oké ọnụ karịa mkpụrụ osisi, otú ahụ ka ego ọ na-eweta
Aha egwuregwu ahụ sụgharịrị dị ka "Flower Glade", ndị egwuregwu ga-azụta fatịlaịza seedlings, na-eto ha ma nweta ego site n'ire osisi na ụlọ ahịa maka ọlaọcha (ego mpaghara), bụ nke nwere ike gbanwere ka e nwee ego n'ezie. Ego kacha nta bụ 2-3 rubles kwa ụbọchị, ndọrọ ego na e-wallets.
ogologo ndụ nke oru ngo ahụ, nke na-egosi oke ntụkwasị obi zuru ezu;
mfe ndebanye na gameplay;
enweghị ego ịkwụ ụgwọ na ihe mgbochi na ịhapụ ego;
nweta ezigbo ego naanị mgbe ego ahụ gasịrị;
E nwere ozi na nlekọta na-agbanwe iwu na nkanka ihe ndekọ na-enweghị ịdọ aka ná ntị.
Egwuregwu ahụ nwere ọtụtụ nzaghachi dị mma.
A n'elu ikpo okwu dabeere na egwuregwu egwuregwu S.T.A.L.K.E.R, nke maara nke ọma ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu. Iji nweta ego, ịkwesịrị wepụ ihe gbasara arịa na ndị enyemaka atọ (ha na-agbakwụnye na-akpaghị aka mgbe ị na-edepụta akaụntụ nkeonwe), wee ree ha na-akpọ baryge. Ọnụ ego kacha nta ị nwere ike ịrụ, na-enwe mmetụta dị ka ezigbo stalker, bụ 28 kopecks kwa ụbọchị, egwuregwu nwere egwuregwu 250-300 rubles kwa ụbọchị.
ihe ngosi na ikuku;
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nchọta.
enweghi ike (egwuregwu ahụ abanyela na otu mmalite);
iwu siri ike;
Iji wepu ego, i kwesiri ijuju akuko gi site na okara 10 rubles
Maka ndị na-eme egwuregwu mgbe niile, a na-enwe ọkwá mgbe niile.
Ụbọchị ịmepụta: 2017
Ndị okike nke ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ ịghọ ndị na-etinye ego site na itinye ego na ụlọ ahịa. Onye nlekota ahia nke mbu kwesiri ịzuta ulo oru ndi nwere uru di iche iche, jikwa ha ma nweta ego nke puru igbanwe ezi ego ma tinye n'ime e-wallets ma obu igwe. Ụlọ ọrụ dị ọnụ ala na-eweta 17 rubles n'ọnwa, ndị kasị dị oké ọnụ - 11 700 rubles.
egwuregwu dị mfe na nke na-enweghị mgbagha;
enweghị ihe mgbochi na ịkwụ ụgwọ;
enweghị ụzọ ndị ọzọ iji mee ego;
ọ dị mkpa iji ego na-enweta ego.
Ihe mgbaru ọsọ nke onye na-agba ọsọ nke ọma bụ iji nweta mmeri n'ọsọ ahụ ma nweta ụgwọ ọrụ ego.
Ụbọchị ịmepụta: 2016
Ụdị usoro 1 maka ndị na-ahụ n'ọsọ, ebe ego nwere ike inweta, na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ndị ọzọ ngwa ngwa, ike ịkwọ ụgbọala ma debe ya n'okporo ụzọ. Maka otu agbụrụ, ị nwere ike imeri site na dollar 1 ruo 3, nke gosipụtara na wallets kọmputa, ego ole i nwetara na-adabere na nkà na ikike nke onye ọkpụkpọ.
Ngwunye nke simulator:
ọtụtụ egwu egwu;
enweghị nyocha ndị ọrụ ọjọọ;
atụmatụ ziri ezi nke na-ekesa ego.
njedebe nkwụsịtụ (ọ dịkarịa ala $ 10);
Iji nweta ego, a chọrọ ego - otu agbụrụ na-akwụ ụgwọ 20 cents.
Egwuregwu ahụ na-enye gị ohere iji kere òkè n'ọkwá na nkwụsị.
Oge mmepe: 2008
Onye na-akpali ego na-eme ihe na-emetụta akụkọ ihe mere eme, nke na-eme na oge nke oge ochie Russia. Mgbe ndebanye aha, onye ọkpụkpọ ahụ ghọrọ onye ọrụ ugbo ma rụọ ọrụ maka obere ego, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike ịga n'ọkwa dị elu ma jiri nwayọọ nwayọọ ghọọ onye omenkà, onye nlekọta, ụlọ akụ, wdg, ịba ụba ego gị. Ego kacha nta bụ 1-2 rubles kwa ụbọchị, ụzọ ị ga-esi wepụ ego bụ wallets kọmputa.
a pụrụ ịdabere na ya;
ọtụtụ ụzọ maka ịzụlite àgwà.
ihe isi ike nye ndi novice;
eserese abụghị àgwà kacha mma;
mkpa iji wuo usoro mgbagwoju anya;
Ọ ga-ewe ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii ka ị nweta ego kachasị oke na-enweghị ego.
Otu n'ime egwuregwu ole na ole n'ịntanetị nke na-enye gị ohere iji ego gị nweta ego
Afọ ntọhapụ: 2011
Ụkpụrụ nke egwuregwu ahụ bụ ịmepụta mgbagwoju anya na saịtị ahụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-eche. За одну попытку с пользователя снимаются средства и зачисляются на счёт автора. Чем сложнее загадка, тем больше средств можно заработать. Выводятся деньги на электронные кошельки, в среднем за одну довольно сложную загадку можно заработать 3 доллара.
Gbasara oru ngo a: echiche mara mma nke ga-adasi ndi nwere mmasị n'egwurugwu.
chebaa ihe ndi mmadu nwere ike ibido mgbe ha meghariri n'akwukwo ahu;
Enweghị nkọwa, ego ga-abụ ntakịrị.
Ịhọrọ egwuregwu ịntanetị iji nweta ego na-agafe agafe, ị gaghị echefu na ha nile bụ ọrụ dị elu, ebe ọ na-adịghị onye na-emesi nnata ego. Tụkwasị na nke a, na asọmpi ọ bụla, enwere ndị mmeri na ndị na-efu, ma ị nwere ike ịbụ n'etiti ndị ikpeazụ. Site na ego ntinye ego dabere na ego ole a ga-enweta.